IMonado 21.0.0: inguqulo ezinzile ethobela ngokusemthethweni i-OpenXR 1.0 standard | Kusuka kuLinux
Abathuthukisi be-Collabora bakhishiwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kwethulwe uhlobo olusha lwe UMonado 21.0.0, okuwumthombo ovulekile owenziwayo wezinga le-OpenXR. Izinga le-OpenXR lalilungiswe yiKhortos Consortium futhi lichaza i-API yendawo yonke yokwakha izinhlelo zokusebenza ezingokoqobo nezingathandwa kwabathelisi esikubona, kanye neqoqo lezingqimba eziphakathi ukusebenzisana nemishini ekhipha izici zamadivayisi athile.
IMonado inikeza isikhathi sokusebenza esivumelana ngokuphelele ne-OpenXR Lokho kungasetshenziswa ukwenza okungokoqobo okubonakalayo nokwengezelelwe kuma-Smartphones, amaphilisi, ama-PC kanye nanoma iyiphi enye into. Ikhodi yephrojekthi ibhalwe ngo-C futhi ikhishwa ngaphansi kwelayisense ye-GPL ehambisana ne-Boost 1.0 yamahhala.
Phakathi kwezici ezisemqoka:
Isilawuli se-HDK (OSVR Hacker Developer Kit) kanye nezigqoko ze-PlayStation VR HMD, kanye neVive Wand, i-Valve Index, i-PlayStation Move nezilawuli zeRazor Hydra.
Amandla wokusebenzisa i-Hardware ehambisana nephrojekthi ye-OpenHMD.
Umshayeli wezingilazi zangempela ezingathandwa yi-North Star.
Umshayeli wohlelo lwe-Intel RealSense T265 Position Tracking System.
Isethi yemithetho ye-udev yokulungiselela ukufinyelela okungeyona impande kumadivayisi weqiniso wangempela.
Izingxenye zokulandelela ukunyakaza ezinokuhlunga kwevidiyo nohlaka lokusakaza.
Ukusebenzisana kwendawo nokuphathwa kwamaphoyinti wokubuka.
Iseva eyinhlanganisela elungele ukusetshenziswa esekela okukhiphayo okuqondile kudivayisi, ngokudlula iseva yohlelo lwe-X. Ama-Shader ahlinzekelwa i-Vive ne-Panotools.
Izindaba eziyinhloko zeMonado 21.0.0
IMonado 21.0.0 bekunguqulo yokuqala yokuhambisana ngokusemthethweni nezinga le-OpenXR 1.0. IKhronos Consortium yenze ukuhlolwa kokuhambisana futhi yengeza uMonado ohlwini lokusetshenziswa ngokusemthethweni kwe-OpenXR.
Ukuhlola kwenziwa ngama-API wehluzo we-OpenGL nama-Vulkan APIs, kusetshenziswa ukwakhiwa kwedeskithophu kumodi yokulingisa yedivayisi yangempela. Ekuqaleni, bekuhlelwe ukuthi kunikezwe inombolo yenguqulo engu-1.0, kepha abathuthukisi banqume ukusebenzisa izinombolo besebenzisa unyaka, ngokufana nokubalwa kwezinguqulo zeMesa.
Siyajabula ukumemezela ukuthi iMonado manje isihlinzeka ngokuhambisana ngokusemthethweni ne-OpenXR. Uhlu olusemthethweni lokusebenzisa okuhambisana ne-OpenXR 1.0 manje lufaka iMonado, ngokuya ngokusebenzisa i-OpenXR yokuhlola ukuhambisana suite ku- "dummy" device.
Qaphela ukuthi isimo sokuthobela i-OpenXR 1.0 sisebenza kuphela kudivayisi eyenziwe. Noma ngubani owakha umkhiqizo esebenzisa iMonado enehadiwe elingalingisiwe kumele aqhubeke nenqubo yokutholwa nokuthotshelwa okugcwele nokujwayelekile kwalowo mkhiqizo ukufuna ukuthobela i-OpenXR futhi athole izinzuzo.
Ukuqamba kwesibili ezibalulekile kwakungukulungiswa kwesilawuli sesikhulumi seSteamVR ngokuqaliswa kwesimo se-tracker, kanye ne-generator ye-plugin ye-SteamVR, evumela ukusebenzisa noma isiphi isilawuli sehedfoni (HMD) nezilawuli ezenzelwe iMonado ku-SteamVR. Isibonelo, iMonado inikeza abashayeli be-OpenHMD, Panotools (PSVR), kanye namahedisethi eVive / Vive Pro / Valve Index VR.
Ngokuphathelene nokuphathwa kwenguqulo, abathuthukisi basho ukuthi le nguqulo yokuqala yokukhipha yanele futhi basukile ochungechungeni lwenguqulo yokuqala engu-0.XY
Le nguqulo yokuqala ehambisana ngokusemthethweni yaziwa njenge-21.0.0, esikhundleni se-1.0.0. Imihlangano ejwayelekile ye-SemVer ibhekane ngqo nokuzinza kwe-API. Kodwa-ke, njengoba ukuphela kwe-API yomphakathi kaMonado kungukucaciswa kwangaphandle kwe-OpenXR, inombolo ejwayelekile yeSemVer kaMonado izohlala enguqulweni yokuqala engu-1 isikhathi eside naphezu kwentuthuko kuphrojekthi.
Esikhundleni salokho, sinqume ukulandela imodeli yokulawula inguqulo yephrojekthi yeFreeDesktop.org, iMesa - i-hybrid yeSemVer kanye nolawulo lwenguqulo olususelwa kudethi.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho yale nguqulo entsha. Ungahlola imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IMonado 21.0.0: inguqulo ezinzile ehambisana ngokusemthethweni nezinga le-OpenXR 1.0
I-KDE Plasma 5.21 ifika nokuthuthuka kusixhumi esibonakalayo, imenyu yezinhlelo zokusebenza nokuningi